Zvemunhu Zvidziviriro Zvigadzirwa | Ingori kumwe kutsvagisa kweGE / Latex / Nitrile / PVC magurovhosi
Iyo Inotungamira Zvigadzirwa Kunze
Isu tinopa imwechete-yekumira sevhisi, mazana evatengi anovimba nesu kuti tigovapa nemhando yepamusoro zvigadzirwa
Misa Kugadzira Kunowanikwa!
Zvemunhu Zvidziviriro Zvigadzirwa
Unidus (HK) mubatanidzwa inopa yepamusoro zvigadzirwa zvekuchengetedza pamitengo inodhura. Kugadzira zvigadzirwa zvekuchengetedza zvinokwanisika kumusika wevazhinji pasina kukanganisa hunhu kwagara kuri chimwe chezvinangwa zvedu. Zvigadzirwa zvedu zvinowanikwa zviri nyore kune vatengi pese pazvinenge zvichidikanwa, ndeipi nharaunda yekushanda yakaoma yavari.
Seye anotungamira ekuchengetedza zvigadzirwa mugadziri muChina, isu tinopa yakazara kuchengetedzeka & hutano mhinduro yekuvandudza kuchengeteka kwenzvimbo yako yebasa. Makumi ezviuru zvevanhu vanovimba nezve zvigadzirwa zvedu kuti vaite kuti nzvimbo yavo yebasa ive yakachengeteka uye zvinoita kuti bhizinesi rive nepfungwa dzakanaka.
Isu tinobatsira kuchengetedza mutengo wako wakaderera nekukupa iwe kukwikwidza mitengo pane zvigadzirwa zvedu. Isu tinopa yakanakisa mhinduro yekushandisa izvo zvigadzirwa kuti uzadzise zvinodiwa nevatengi vako pasina kuda kushandisa imwe mari kutenga iyo inpropriate chigadzirwa.
Acree ine yayo yekugadzira zvirimwa muChina uye yakafara nzvimbo yekuparadzira network kutenderera nyika. Isu tinopa anopfuura 3000+ marudzi emidziyo yekuzvidzivirira (PPE) uye zviridzwa.
Kana kuchengetedzeka kwevashandi kukavimbiswa munzvimbo yekushandira, mikana yekuwedzera kugadzirwa uye kugona zvinowedzera. Vashandi vako vanozonzwa vane chivimbo uye vachikwanisa kutarisa pane iro basa riripo pane kuve nehanya nekuchengeteka kwavo uye kugara kwavo zvakanaka pavanenge vari pabasa.
Anopfuura makore gumi echiitiko muPeople Protective Equipment (PPE) yekugadzira, inogadzira pasi peyakaomesesa mhando yekudzora masisitimu akasimbiswa kune ISO 10: 9001 Standard. Zvemhando zvigadzirwa zvinogoneswa kune akasiyana epasi rose mwero uye inotsigirwa neStrong R&D Chikwata chekuenderera nekuvandudza pane Chigadzirwa Hunhu.
Tichapindura mubvunzo wako mukati maawa makumi maviri nemana. Inotsigirwa nechikwata cheane ruzivo Chengetedzo Consultant kuti ipe zvirinani rutsigiro rwehunyanzvi uye In-imba dhizaini timu kuti ikubatsire iwe kugadzirisa zvigadzirwa.
Tora kubva pane akanyanya kunaka
Isu tinopa mhinduro yakanakisa maererano nekuchengetedza ine yakazara yakazara zvigadzirwa uye masevhisi. Taura nesu kuti titore mari yakanakisa yekuona nharaunda isina tsaona.
Muvhuro- Chishanu: 8: 00-18: 30 Hrs
(Runhare kusvika 17:30 Hrs)
Mugovera - 8: 00-16: 00
Musoro Hofisi: FLAT C, 9 / F, WINNING HOUSE, NO. 72-76, WING LOK STREET SHEUNG WAN, HONG KONG
Foni: + 86 512 56986025
Tine Mhinduro Dzakakura
Bvunza Isu Chero Chinhu
Une Nguva Yakareba Sei Wakagadzira PPE zvigadzirwa
Kutanga kubva kumugadziri wemagirovhosi epa PE, mushure megore rinopfuura gumi dhizaini, ikozvino isu tinopa zvinopfuura makumi matatu mhando dzePNP zvigadzirwa.
Unogamuchira OEM diki odha huwandu
Hongu, tinogona kugadzira nekugadzira zvinoenderana nevatengi zvinodiwa.Tinogamuchira OEM nediki diki, tinotarisira kugadzira bhizinesi pamwechete.
Iwe uchaita yemhando yekutarisa isati yatumirwa yega?
Hongu, kune yega yega odha, isu tinoita kuongorora pane akasiyana maitiro ekugadzira, uye isu tichava neyedu yakasarudzika QA timu kuti tiongorore mhando isati yatumirwa.
Ndeipi yako yemhando garandi kune ese akaendeswa maodha?
Tichapindura kugunun'una kwevatengi mukati memaawa gumi nemaviri, uye isu tine basa rezvinhu zvese zvemhando yepamusoro.
Ndeipi yako yekubhadhara mazwi?
Gamuchira kubhadharwa kuburikidza neT / T (Bhengi kuchinjisa), L / C pakuona (hombe maodha) ..
Ndeipi nguva yako yekuendesa?
Kazhinji isu tinotakura odha nyowani mukati memazuva makumi matatu, asi isu tinoita zvakare kusundira kurongeka munguva pfupi.
Ndingaite sei kuti ndiwane bhajeti?
Normall isu tinokwanisa kupa yekupa base pane ruzivo senge rakapetwa sketch kana chigadzirwa zvigadzirwa. Iwe unogona zvakare kuwana quote base pamufananidzo, ndokumbira utarise kuti kana quote yakadai yakapihwa tinochengetera kodzero yekugadzirisa mitengo kana ruzivo rusingazivikanwe rukaziviswa gare gare.
Ko kana ndikatadza kuwana chaicho chigadzirwa chandiri kutsvaga kubva pawebhusaiti yako?
Tinoda kuve sosi yako izere yezvigadzirwa zvePPE. Isu tinoshanda kupa mhinduro dzinobatsira vatengi vedu kubudirira. Acree zvakare iri kubatsira kubatsira kuvandudza PPE zvigadzirwa mukubatana newe. Uye mune zvisingawanzoitika nyaya yekuti isu hatisi ivo vakanyanya sosi, isu tinobatsira kunongedzera iwe munzira kwayo.
Bhalisa Netsamba Yedu
Pano iwe unowana yedu nyowani chigadzirwa ruzivo uye mutengo
Copyright 2012 - 2022 Acree | Kodzero Dzese Dzakachengetedzwa Powered by Acree
Dzidza mabatiro atakaita 100 epamusoro zvigadzirwa kuti zvibudirire.